Amathemba of Mining 2018 - Blockchain Izindaba
With ukunakekela cryptocurrency ukukhula, isidingo imishini ezimayini ikhuphukile kanye. Eminyakeni embalwa edlule wonke umuntu kwadingeka ukufinyelela kukhompyutha ngokwanele enamandla wayesengaba wokumba, ngenkathi onyakeni owedlule isimo isishintshe kakhulu nezindlela odlule kwemayini kakade sebeye baba ayizwakali. Siye wabikezela ukuthi izimayini Amathrendi kungaba ethandwa kakhulu 2018.
Ihluzo namakhadi yezimayini
Namuhla imishini ngempela eqolo luyadingeka yezimayini, ngokuqondene, ihluzo amakhadi. Kugcine Juni Chinese online platform Ukuhweba AliExpress libike ukuthi abasebenzisi bayo sabukeka izikhandle kakhudlwana ekufuneni onobuhle ezithile ihluzo amakhadi babe ezifanele kakhulu ngokudala amapulazi yezimayini. Leyo mikhumbi ethandwa kakhulu phakathi abavukuzi Russian kukhona Nvidia ihluzo amakhadi-GeForce GTX 1060 futhi GTX 1070, kanye Radeon RX480, oluqanjwe Advanced Micro Devices (AMD).
Ngalezi onobuhle kokuba ethandwa, hhayi nje phakathi abavukuzi Russian, ngonyaka odlule imakwe ukwabelana AMD sika Enyuka 64%, ngenkathi ukubaluleka Nvidia Corporation izibambiso yazuza cishe 88% kusukela ekuqaleni 2017. Ochwepheshe bathi ukukhula kuthiwa wenziwa inani elikhulu abavukuzi ka e inethiwekhi Ethereum nezinye cryptocurrencies ethandwa. Nvidia idatha eshicilelwe okubonisa 6.7% ka imali engxenyeni yesibili 2017 evela ihluzo amakhadi yokuthengisa, okuyinto zazisetshenziselwa izimayini mfihlo. Yingakho lezi zinkampani ezimbili futhi ASUS inkampani Ususithathile kakade ukukhipha esiyingqayizivele ihluzo amakhadi eyenzelwe izimayini cryptocurrency. Futhi, ngehlobo elidlule sasazi ukuthi AMD ayelungisa 7nm 48 core processor ngokuthi starship ukuthi zazidedelwa ngo 2018.
Ochwepheshe, Nokho, ukuxwayisa izimayini abakhiqizi imishini ledzinga imikhiqizo yabo uya shwabanisa. Ngokusho Joseph Moore, i umhlaziyi at yasebhange American ubambe inkampani Morgan Stanley, izimayini ungase ube umsebenzi kwezomnotho ezingenanzuzo e 2018.
“Sikholelwa ukuthi inani ihluzo yokuthengisa for yezimayini ethereum e 2017 ngizo $800 million noma ngakho, futhi izoyenqaba ngu 50% e 2018.”
Ngokubona Moore sika, isizathu sokuqala salokhu lawa unya lohleliwe kule jikelele block umvuzo kunethiwekhi ethereum kusukela 5 Eth ukuze 3 Eth. Owesibili ashintsha kusuka Ubufakazi Umsebenzi (Pow) ukuze Ubufakazi Esigxotsheni (pOS) lapho esikhundleni amandla yezimayini, ematfuba ukudala block nokwamukela umvuzo ehlobene ezilinganiselwe nobunikazi yomsebenzisi esigxotsheni ohlelweni. Vijay Rakesh, i umhlaziyi we-Japanese utshalomali yasebhange Mizuho, okukhulunywa lokhu kuthambekela futhi. Abeciniseka ngekutsi engxenyeni yokuqala ka 2018, ihluzo amakhadi ngeke besakwazi yadingeka izimayini cryptocurrency ezifana izimayini ether.
“Sikholelwa ukuthi ethereum ubukeka ukuthuthela ehlukile uhlelo yokuqinisekisa zokukhokha ku kulezi zinyanga eziyisithupha ezizayo, kusukela Ubufakazi-of-Work nokusetshenziswa ihluzo amakhadi Ubufakazi-of-Esigxotsheni lapho ihluzo amakhadi ayisadingeki.”
Le phrojekthi ukulungisa ukuvumelana olandelwayo kwenethiwekhi Ethereum libizwa Casper. Libonisa ukuthi imishini computer ezikhethekile ayidingeki manje ukudala block entsha; esikhundleni, abasebenzisi bazokwazi ukunikeza izimali zabo ukuthi amanzi ayeba yiqhwa isikhathi esithile, futhi ukubuya, bayoba nethuba iqhaza ukuthengiselana isiqinisekiso. Ngakho, Casper kuzodala uhlelo ukuthi wakwazi ukumelana izimayini yinye. Uma waseConstantinople ekuphambukeni olandelayo, okungase kwenzeke ekuqaleni 2018, ithatha indawo, isibuyekezo Ethereum inethiwekhi izoqaliswa.
Naphezu ushintsho okunamandla ukuvumelana olandelwayo we inethiwekhi Ethereum, inhloko Nvidia, Juan Zhjensjun, Uyaqiniseka ukuthi ngenzuzo eyenziwe kusukela GPU (kuyunithi lokucubungula) yokuthengisa for yezimayini mfihlo uzogcinwa, begomela cryptocurrencies futhi blockchain kukhona “nesazoqhubeka.”
“Lena emakethe nje engeke idonse kude ukuya sifike maduze, futhi into kuphela sikwazi cishe angalindela ukuthi kuyoba zezimali kuseza. Luyofika lonke okuningi ukulandelana kwamakhosi ezizwe ezihlukahlukene. It kuzovela ngezikhathi ezithile, futhi i-GPU ngempela ngempela kakhulu kuwo.”
ASIC (Isicelo-Specific Uxhumano Circuit) okukhona ngesimo chips yadalelwa izimayini ngempumelelo kanye. ASICs asetshenziselwa ngedivayisi ethile futhi afeze imisebenzi ngokuqinile kungagcini, okwenza kubulawa lezi imisebenzi eshibhile futhi ngokushesha. I chips zinamandla futhi kuchitha amandla ingasaphathwa; zingabantu kaningi inzuzo kuka ihluzo amakhadi. Ngaphezu kwalokho, amapulazi izimayini badinge isikhathi esengeziwe ukuze ulichithe inhlangano ekupheleni, ngenkathi nge ASIC-abavukuzi konke sekulungile.
Kulo nyaka kwembulwe ukuthi izinkampani, ezifana Samsung, Intel, TSMC, futhi Foundries Global, abangu ekuthuthukiseni 7nm chips ASIC yezimayini. Chips ukukhiqizwa kuhlelelwe ngekota yokuqala ka 2018. Bayoba ngcono amandla ukuqeqesheka kuqhathaniswa yangaphambilini 14nm chips.
Japanese giant Inthanethi GMO uhlela ukwethula entsha ASIC-Umvukuzi ukuthi lusekelwe 7nm chips. IMisa chips sokukhiqiza kulobu buchwepheshe sibizwa ehlelelwe Meyi 2018. Ngonyaka ozayo GMO bazosungula ICO ukuthengisa izimayini amabhodi alandelayo. Bazobe sebekhipha amathokheni njengoba indlela ukuthenga izimayini amabhodi alandelayo. Ngaphandle, inkampani uhlela ukwakha izimayini isikhungo eNyakatho Yurophu:
“Sizokwenza ukuqhuba alandelayo izimayini isikhungo sisebenzisa lamandla ezisashisa Semiconductor chips eNyakatho Yurophu. Sizosebenzisa cutting edge 7nm inqubo ubuchwepheshe for chips ukuthi kusetshenziswe inqubo yezimayini, futhi ngokuhlanganyela ukusebenza yocwaningo nokwakheka kwalo kanye nokukhiqiza nge umbimbi lwethu umlingani kokuba Semiconductor design ubuchwepheshe.”
Ngo-September odlule, Russian Umvukuzi Coin (RMC) ICO olwenziwa ukusekela ukukhiqizwa entsha emayini Sunrise ne Bitfury chips nokuthuthukisa omunye omusha emayini Multiclet nge chip efanayo. I ICO eqoqwe $43.2 abayizigidi ezingu. RMC kuhilela 15 izishoshovu osomabhizinisi cryptocurrency futhi uhlanganisa izinkampani ezine, kuhlanganise MultiClet, SMARTHEAT, Goodwin, futhi RadiusGroup. Le nkampani isiqalile Umvukuzi Sunrise ukukhiqizwa futhi, ngu ehlobo elilandelayo, okuhloswe ngayo ukuthuthukisa alandelayo processor Multiclet, okuzoba 35 izikhathi letisebentisekako yezimayini.
Kusobala ukuthi imishini enamandla futhi kuyabiza, okuyinto kakhulu amandla usithathela isikhathi, kuyadingeka ukuze yezimayini yimpumelelo. Yingakho izinkampani baye uhlobo okunye kwemayini, ngokuthi ifu izimayini. Izinkampani ezinamathuba izikhungo idatha enamandla ukunikeza imishini, futhi ukuqasha imithombo yabo umthengi lokugcina. Uma inkontileka kuphothulwe kanye izinsizakalo zikhokhelwa, izinkampani ezifana Hashflare, Genesise Izimayini futhi IQMining ukunikeza ukufinyelela okumba cryptocurrencies eziningana.
Lawa masevisi kakade nemfashini. Asikho isizathu sokukholelwa ukuthi le ukuthambekela kuzoba sokwehlisa ijubane 2018, njengoba imboni yezimayini ifu kuyinto ezingabizi, okuthembekile, futhi indlela elula uthole cryptocurrency, ukuthi Akudingi izimpahla ezibizayo. Kukhona ezithile ezingathandeki kungenzeka. Umdayisi izinkontileka ezimayini ifu kungaba ngokungafanele; isayithi enikeza lolu hlobo lwenkonzo kungase kube kungahlaseleka nokugenca; abasebenzisi akanakho ukuphatha phezu kwezinqumo Imali ikhomishana abakutholayo ngoba izimayini; ngaphezu kwalokho, ukulahlekelwa engahlelelwe iphoqe idatha sosizo ukuze abuyisele kancane kubasebenzisi bayo ngaphansi izivumelwano ezilandelayo.
okwamanje, kungekho imithetho elawula umsebenzi wezimayini eRussia nakwamanye amazwe noma. I-Russian uMongameli isimemezelo, Nokho, uthi uHulumeni Central Bank kuyodingeka ukusungula intela kanye yokubhalisa ukuze izinkampani zezimayini ehlobo elilandelayo. Leligxathu lizoba okuthiwa ubheke zombili izinkampani kanye abavukuzi yangasese.
Ngo-December, Commissioner ngaphansi uMongameli Russian Federation ukuvikelwa kwamalungelo osomabhizinisi, boris titov, ezihlongozwayo ukwethula intela yezimayini mfihlo ngesilinganiso 14%.